News Collection: कोइलाखानीका बँधुवा नेपाली बालबालिकाबारे राष्ट्रसंघमा छलफल हुने
कोइलाखानीका बँधुवा नेपाली बालबालिकाबारे राष्ट्रसंघमा छलफल हुने
६० दिनभित्र जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई राष्ट्रसंघको आग्रह
सुरुङमा निसासिएर मर्छन् बालबालिका
नयाँ पत्रिका -काठमाडौं, १ मंसिर
भारतीय उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जयन्तीया हिल्सस्थित कोइलाखानीमा बँधुवा मजदुरका रूपमा राखिएका ३० हजार नेपाली बालबालिकाबारे राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा समेत छलफल हुने भएको छ　। यसका लागि नेपाल सरकारले ६० दिनभित्र राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउनुपर्नेछ　।
६० दिनभित्र यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन पठाउन राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्　। 'हामी आगामी ६० दिनभित्रै नेपालले अनुसन्धानसहितको तथ्यपरक प्रतिवेदन पठाए त्यसलाई सम्मान गर्नेछौँ,' प्रतिवेदकहरूले भनेका छन्, 'नेपाल सरकारले हाम्रा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरूको सही र तथ्यपरक ढंगले बुझेर जानकारी गराउनेछ　। त्यसपछि हामी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसमक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ　।'
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार मेघालयको जयन्तीया हिल्समा सञ्चालित कोइलाखानीभित्र सानासाना सुरुङ छन्, जसलाई र्‍याट माइन्स (मुसाखानी) भनिन्छ　। 'र्‍याटमाइन्स'मा ४० हजार बंगलादेशी र ३० हजार नेपाली बालबालिका रातदिन काम गरिरहेका छन्　।
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कैयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कैयाँै मर्छन्　। राष्ट्रसंघका अनुसार कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन्　।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौनशोषण हुन्छ　। 'कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रकड्राइभसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौनशोषण गर्छन्,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ　। राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार केही बालिकालाई खानीबाट सहर-बजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौनधन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ　।
मेघालयमा नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ　।
नेपाली बालबालिकाले विदेशमा पाएको कठोर यातनाबारे राष्ट्रसंघले यति गम्भीर पत्र नेपाली प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म लेखेको थिएन　। मानव बेचविखन, महिला, बालबालिका तथा दासत्व, बालश्रम शोषण तथा बाल यौनशोषण र बाल अश्लीलता हेर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको अध्ययनपछि राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन तयार भएको हो　।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई पत्र बुझाउँदै मेघालयमा जोखिममा परेका नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ　।
६० दिनभित्र जवाफ देऊः नेपाल सरकारलाई राष्ट्रसंघको पत्र
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जयन्तीया हिल्समा रहेको कोइलाखानीमा नेपाल र बंगलादेशबाट लगिएका ७० हजार बँधुवा बालममजदुर कार्यरत छन्　। कथित र्‍याट माइन्स (मुसाको प्वालजस्तो सुरुङ) मा उनीहरू काम गर्न बाध्य छन्　। निकै साँघुरो प्वालबाट लुसुलुसु मुसा छिरे जसरी नै मुस्किलले छिराएर बालबालिकालाई काम गर्न लगाइन्छ　। खानीमा नेपालका ३० हजार र बंगलादेशका ४० हजार बालबालिका छन्　। बालबालिकालाई नेपालका विभिन्न गरिब बस्तीबाट मानव ओसारपसार गर्ने तस्करहरूले मेघालय पुर्‍याउने गरेका छन्　।
बालबालिकालाई दलालहरूले कहिले अपहरण गरेर त कहिले किनेर मेघालय पुर्‍याई खानी-माफियालाई दिने गरेका छन्　। नेपालका अत्यन्तै गरिब गाउँ-बस्तीमा पुगेर तस्करहरूले बालबालिकाका अभिभावकलाई फकाई-फुल्याई गर्छन्　। अत्यन्तै गरिब बाबुआमाले ५० देखि ७५ डलर (तीनदेखि पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ) मा आफ्ना नाबालकहरूलाई तस्करको जिम्मा लगाउँदा ती बालबालिका मेघालय पुग्ने गरेका छन्　। कतिपय बालबालिकालाई अपहरण गरेर पनि पुर्‍याइने गरिएको छ　।
बालबालिकाले काम गर्ने स्थान अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ　। साथै अत्यन्तै अस्वस्थकर, निर्दयीपूर्ण र अमानवीय अवस्थामा उनीहरू काम गर्न बाध्य छन्　। ती बालबालिका सानो प्वाल जहाँबाट मुस्किलले शरीर मात्रै छिराउँछन्, त्यस्तो स्थानमा सुतेर, घसि्रएर पस्नुपर्ने र शरीरलाई अत्यन्तै जोखिममा पारेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ　।
बालबालिकालाई बाहिरी संसारसँग पूर्णरूपमा अलग राखिएको छ　। उनीहरूलाई कसैसँग पनि आफ्नो परिचय नखुलाउन धम्की दिइएको छ　। बाहिरी संसारसँग कति पनि घुलमिल गर्न दिइएको छैन　। परिवारसँग पनि भेट्न दिने गरिएको छैन　। खानीमा काम गर्दा कुनै सुरक्षित खालको साधन बालबालिकालाई दिइएकोे छैन　। असुरक्षित खन्तीहरूबाट कोइला निकाल्न लगाइन्छ　।
असुरक्षित कामकाजले ती बालबालिकाको मृत्यु पनि सामान्यजस्तै बन्न पुगेको छ　। कतिपयको सुरुङभित्र सास थुनिएर मृत्यु भएको छ भने कतिपय अन्य दुर्घटनामा मारिएका छन्　। कोइलाखानीमा कैयौँ मानव अस्थिपञ्जरसमेत फेला परेका छन्　। जोखिमपूर्ण रूपमा काम गर्दा अचानक मृत्यु भएका र अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका बालबालिकाको अस्थिपञ्जर छरपस्ट रूपमा यत्रतत्र रूपमा छरिएको देख्न सकिन्छ　।
बालबालिका निकै कठिनपूर्ण जीवन बिताउन विवश छन्　। उनीहरू प्लास्टिकले बनेका छाप्राहरूमा बस्ने गरेका छन्　। सरसफाइ छैन　। स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ　। शौचालयको उचित व्यवस्थापन छैन　। त्यसैका कारण कैयौँ बालबालिका बिरामी पर्ने गरेका छन्　। नजिकै कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्यचौकी छैन　। यसैका कारण पनि उनीहरू विभिन्न संक्रमणको सिकार हँुदै आएका छन्　।
खानीमा कार्यरत बालिकाहरू चरम यौनशोषणको सिकार बन्ने गरेका छन् खानीमालिक, प्रबन्धक तथा पुराना कामदार तथा कोइला ओसारपसार गर्ने ट्रकका चालकबाट समेत बालिकाहरू यौनशोषणमा परेका छन्　। केही बालिकाहरूलाई सहर-बजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ　।
यी आरोपहरूको सम्बन्धमा हामी ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ　। तर, हामी यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला तथा बालबालिका बेचविखन र ओसारपसारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पालना गर्न आग्रह गर्छौं　। जुन महासन्धिमा १२ डिसेम्बर २००२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदनचाहिँ गरेको छैन　। महासन्धि अनुमोदन नगर्दा महासन्धिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा नभएको देखिन्छ, बरु महासन्धिकै खिल्ली उडाउने काम गरेको देखिन्छ। मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव बेचविखन तथा तस्करीविरुद्धमा सिद्धान्त तथा नियमहरू तय गरेको छ, जुन अहिले सान्दर्भिक हुन आउँछ　। यो विषयमा हामी राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको धारा ३५ स्मरण गराउँछौँ जुन नेपाल सरकारले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको छ　। सो धाराअनुसार बच्चाहरूलाई अपहरण, तस्करी, बेचविखन, शोषणबाट बचाउन राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय उपायहरू अवलम्बन गर्नपर्ने हुन्छ　। त्यस्तै सन् २००२ मा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि नं. १८२ अनुमोदन गरिसकेको छ　। महासन्धिअनुसार बालबालिकालाई कुनै पनि खालको कामका लागि दास बनाएर प्रयोग गर्न, निकृष्ट श्रममा लगाउन बन्देज गरिएको छ　। हामी नेपाल सरकारलाई ती बालबालिकाहरूको अधिकार तथा स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्दै उद्धार गर्न अनुरोध गर्छौं　। यसका लागि सरकारले भारतीय अधिकारीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी ती बालबालिकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी घर फर्काउन र उनीहरूलाई पुनः सहज जीवन दिनु आवश्यक छ　।
हामीले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गरेका हौँ　। यसमा नेपाल सरकार आफैंले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ　। हामीले पाएको तथ्यलाई सरकारले विचार गर्न सक्छ　।
नेपाल सरकारले निम्न विषयमा आफैं जाँचबुझ गर्नसक्छः
१) हामीले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन सत्य हो या होइन ?
२) कृपया खानीमा बँधुवा बनाइएका बालबालिकाहरूको परिचय, उनीहरूले भोगिरहेको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लेऊ　। साथै उनीहरूको पहिचान, उद्धार तथा अवस्था जान्नका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गर　।
३) कृपया अनुसन्धानपछि प्राप्त नजिता हामीलाई पनि देऊ　। त्यस्तै बालबालिकाहरूलाई लैजाने तस्करहरूबारे पत्ता लगाऊ र त्यसबारे विस्तृत जानकारी गराऊ　।
४) नेपाल सरकारले बालबालिकाहरूको बेचविखन, मानवतस्करी र यौनशोषण नियन्त्रण गर्न नेपालले हाल अख्तियार गरिरहेको नीतिहरू तथा प्रतिरोधात्मक उपाय तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी देऊ　।
५) खानीमा मारिएका या अंगभंग भएका बालबालिकाका परिवारको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने पहुँच वा प्रक्रिया छ या छैन, जानकारी देऊ　।
हामी आगामी ६० दिनभित्रै नेपालले प्रतिवेदन पठाएको हेर्न चाहन्छौँ　। हामी त्यसलाई सम्मान गर्नेछौँ　। साथै नेपाल सरकारले हाम्रा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरूको सही र तथ्यपरक ढंगले बुझेर जानकारी गराउनेछ　। त्यसपछि नेपालले पठाएको प्रतिवेदनलाई हामी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्समक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ　।
(राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको सारांश)